Candy Crush 4001 - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush 4001
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 3, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
Have you seen something become really popular and then fallen apart? ကောင်းပြီ, there are thousands of brands which have seenagreat hype but once they fall you forget about them in days. သို့သျောလညျး, we bring youabrand that gainedalot of popularity in the beginning and it has maintained the same hype to date.
Candy Crush isagame that gained immense fame all around the world. It broke the record in terms of its usage. This game was played by every other person. Undoubtedly the world claimed it to be the best game. It should also be noted that the popularity of this game remains the same in the eyes of the user. They still prefer this game over any other game. The reason being it bringsavariety of levels. Every level hasadifferent target. Once you achieve that then only you can move to the next level. Users have liked the complexities it brings with itself. You just can’t solve it easily. Some sort of strategy is required. Additionally, သင်တို့သည်လည်းဒီအဆင့်ကိုဖြေရှင်းကြသူတွေကိုထံမှလမ်းညွှန်မှုချင်တယ်.
သင့်ထံသကြားလုံးကြိတ်ခွဲခြင်းအဆင့်အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည် 4001. ၎င်းကိုအခက်ခဲဆုံးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. တကယ်ပါပဲ, သငျသညျအခြို့သောလမ်းညွှန်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒီတော့ဒီမှာအဆင့်အတန်းအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် 4001.
ဒီအဆင့်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြံကတော့ချယ်ရီသီးသုံးချောင်းကိုစုဆောင်းဖို့ပါ. ဒီနှင့်အတူ, သင်ဒီအဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ဂျယ်လီအားလုံးရှင်းလင်းရမည်. ၎င်းသည်ပုံရသည်နှင့်မလွယ်ကူပါ. သင်တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်သည်. သင်၏လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ. မလိုအပ်သောအရာများ၌မဖြုန်းတီးပါနှင့်.
Candy Crush 4001 လှည့်စားခြင်းနှင့်လှည့်ကွက်
ဒီအဆင့်ကိုဖြေရှင်းဖို့သင့်စိတ်ထဲမှာသင့်တော်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုထားပါ. အဓိကအာရုံစိုက်ရမည့်အချက်မှာဂျယ်လီဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ချယ်ရီသီးများကိုစုဆောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်. သူတို့ကိုသင်ချောချောမွေ့မွေ့စတင်ခြင်းဖြင့်လုပ်သင့်သည်.
ချောကလက်နှင့်ဂျယ်လီများကိုရှင်းလင်းရန်ဘယ်ဘက်မှအစစတင်ပါ. သင်၏ပထမဆုံးသော့ကိုစောင့်နေစဉ်တွင်သင်ပြုလုပ်သင့်သည်. Switch the dropped cherry from the conveyor with yellow. နောက်ပိုင်းတွင်, it will allow you to unlock the next chocolate row.
ထို့အပြင်, plan to clear the chocolate to move to the next cherry. Once you have collected all the cherries you will be short on moves. Think carefully about your next moves as it could beado or die situation for you. Make sure you have enough remaining moves to clear the jellies. Then only you can complete this level.
If you follow these basic steps you will end up completing this level with ease. သို့သျောလညျး, if you opt foradifferent approach you will run out of moves.